The Honor Rịba ama 10 bụ ukara: 6.95-anụ ọhịa ihuenyo, Kirin 970 na ndị ọzọ | Gam akporosis
Ọhụrụ sitere na enyemaka Huawei dị ebe a. Anyị na-ekwu maka Honor Note 10, na phablet na nso nso a gosipụtara nnukwu ihuenyo nke na-emetụ diagonal 7-inch dị obere.
Ngwaọrụ a na ngalaba kachasị mma nke ụlọ ọrụ siri ike, nke Huawei kacha ọhụrụ Kirin SoC dị ugbu a iji lekọta imezu site na nke kachasị mfe na ọrụ kachasị achọ n'enweghị nsogbu ọ bụla. Ọzọkwa, dịka ngalaba ngalaba foto dị, ọ naghị ahapụ ihe ọ bụla achọrọ. Anyị na-agbasawanye gị!
Ọ bụrụ na anyị abanye n'ime njirimara na nkọwapụta nke nkọwa nke Honor Note 10, anyị na-ahụ ihuenyo 6.95 nke anụ ọhịa FullHD + AMOLED na 2.280 x 1.080 pikselụ mkpebi (355pps) n'okpuru usoro 18.5: 9.. Ọ na-enweghị ọkwa a ma ama, a na-akpọkwa ya notch, nke e chere na ọ dị na ekwentị.
Ma mgbawa n'ime, octa-core Kirin 970 (4x Cortex-A73 na 2.4GHz + 4x Cortex-A53 na 1.8GHz) na NPU n'akụkụ Mali-G72 MP12 GPU bụ ihe ị nwetara. Na mgbakwunye na nke a, ya na 6GB ma ọ bụ 8GB RAM na-esonyere ya, ebe a na-etinye 64GB na 128GB nke ohere nchekwa dị n'ime ya na ụdị atọ ahụ. Na-akwado mgbasa ebe nchekwa ROM site na kaadị microSD.
Ihe ngosi nke Honor na-akwado ihe ntanetị foto abụọ nke 10MP + 24MP (f / 16) na AI, na ihe ngosi 13 megapixel n'ihu na oghere f / 2.0 nke ga-enyere anyị aka maka ịme onwe anyị, na-akpọ oku vidiyo na ịmeghe ihu ma ọ bụrụ na akara mkpịsị aka na azụ n'akụkụ igwefoto abụghị ihe gị. Ihe niile a kawanye mma site na iji Artificial Intelligence and the Neural Processing Unit (NPU) nke ọ jikọtara.
Ọ bara uru ikwu na ụlọ ọrụ ahụ emejuputa a mmiri jụrụ usoro onye isi ọrụ ya bụ igbochi ọnụ na-ekpo oke ọkụ n'oge a na-eji ya eme ihe. Nke a metụtara, karịa ihe ọ bụla, mgbe eji egwu dị elu na-egwu egwu. Anyị nwere ike igwu egwu ogologo oge na-enweghị nkwụsị n'enweghị nsogbu ọ bụla, n'otu oge ahụ, ekele maka batrị 5.000mAh nke na-enye anyị nnwere onwe dị mma maka ya.
Dabere na njirimara ndị ọzọ, ekwentị ọhụrụ na-agba gam akporo 8.1 Oreo n'okpuru EMUI 8.2, O nwere mmelite nke Akụrụngwa ekele maka GPU Turbo, ọ bịara na teknụzụ NFC, njikọ 4G (VoLTE), WiFi abụọ, Bluetooth 4.2, USB Type-C, GPS, Dolby Atmos na Dolby AC-4 stereo usoro ụda, jikoro 177 x 85 x 7.65mm ma tụọ gram 230.
The Honor Note 10, maka ugbu a, ahaziri maka ire ere na mba China na oji na acha anụnụ anụnụ n'okpuru ọnụahịa na ụdị ndị a:
Sọpụrụ Nkọwa 10 6GB RAM na nchekwa 64GB:2.799 yuan (349 euro na ọnụego mgbanwe).
Sọpụrụ Nkọwa 10 6GB RAM na nchekwa 128GB: 3.199 yuan (399 euro na ọnụego mgbanwe).
Sọpụrụ Nkọwa 10 8GB nke RAM na 128GB nke nchekwa: 3.599 yuan (449 euro na ọnụego mgbanwe).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » The Honor Note 10 bụ ọrụ: 6.95-inch ihuenyo, Kirin 970 na ndị ọzọ
OPPO F9: Ntughari nke akwukwo a bu ihe di ugbua